Tsy misy farany ny “kidnapping” : nisy naka an-keriny koa ny DG-n’ny Ocean Trade | NewsMada
Tsy misy farany ny “kidnapping” : nisy naka an-keriny koa ny DG-n’ny Ocean Trade
Par Taratra sur 12/06/2018
Tafahoatra loatra ! Tao anatin’ny herinandro mahery kely izay, mpandraharaha karana, tompona orinasa goavana efatra no nisy naka an-keriny. Vao omaly hariva, nalain’ny jiolahy nirongo basy an-keriny, teny Tsarasaotra, koa ny tale jeneralin’ny orinasa Ocean Trade.
Mila ho isan’andro ny “kidnapping karana”! Nalain’ny jiolahy nirongo fitaovam-piadiana an-keriny, teny Tsarasaotra Soavimasoandro indray koa, omaly, tokony ho tamin’ny 6 ora sy sasany hariva ny tale jeneralin’ny orinasa Ocean Trade, i Moustapha Hiridjee. Filohan’ny Vondron’ny mpandraharaha mpivarotra sy mpanafatra fiarakosia (Groupement des concessionnaires automobiles de Madagascar) koa ny tenany. Teny amin’iny lalam-baovao Soavimasoandro iny no nanakanan’ny jiolahy ny fiara nentiny tamin’izany. Jiolahy maromaro nirongo basy toy ny Kalachnikov ary nitondra fiara hafa naka an-keriny azy ity. Nitranga tao anatin’ny fotoana fohy izany teny an-toerana. Nanjavona nanomboka teo ilay karana io. Navelan’ireo jiolahy teny an-toerana ny fiaran’ilay Karana. Nitangorona ny olona nahita ilay fiara nihanjahanja teo. Ora vitsivitsy taorian’izay, tonga teny an-toerana ny polisy. Hatreo aloha ny vaovao fantatra mikasika ity tranga fakana an-keriny farany ity.
Vao ny zoma alina teo, votsotra rehefa notazonin’ireo jiolahy an-keriny nandritra ny 15 andro i Navage Veldjee, tompon’ny orinasa Veloptic, nisy naka an-keriny, ny 24 mey 2018 lasa teo, teny Ampasampito. Io zoma io ihany koa ny nakan’ny jiolahy an-keriny ny teratany karana iray antsoina hoe Nizar Pirbay, fantatra amin’ny solon’anarana hoe i Zouzou, 44 taona, tany Toamasina. Jiolahy miisa efatra, nitondra basy Kalachnikov roa sy PA roa nandeha moto scooter roa no naka an-keriny azy tamin’io zoma alina io.
Ny ankoatra izay, mbola tsy votsotra kosa i Rishi Chandarana, ilay zanaky ny tompon’ny hotel Le Mellis, nisy naka an-keriny teny Andakana Ambohidratrimo ny alahady 3 jona teo.
Miraviravy tanana ny Karana
Manoloana ity tranga misesy amin’ny fakana an-keriny karana ity, miraviravy tanana tanteraka izy ireo. Manao antso avo ny CFOIM ny fikambanan’ny Karana frantsay eto amintsika mba hijerena akaiky ity tranga ity. Ny Karana mizaka ny zom-pirenena frantsay any Toamasina, fantatra fa hanao hetsika tsy hivarotra mandritra ny iray andro.
Araka ny fanazavan’ny mpitandro filaminana, andaniny, anisan’ny mampanano sarotra amin’ny fikarohana ireo jiolahy ny tsy fanomezan’ny fianakavian’ny Karana vaovao momba azy ireo. Izany hoe, tapi-dalan-kaleha ihany ny mpitandro filaminana manoloana izany. Ny fianakavian’ny Karana rahateo, mety hahazo fandrahonana tsy hanome vaovao. Andrasana ny tohin’ny raharaha.